Donald Trump oo sheegay haddii uu ku guuleysto xilka Madaxweynaha inuu xiri doono Hillary Clinton. | Baydhabo Online
Donald Trump oo sheegay haddii uu ku guuleysto xilka Madaxweynaha inuu xiri doono Hillary Clinton.
Donald Trump oo 70-jir ah ayaa hadalkaasi ka jeediyey Doodii 2-aad ee ay xalay sida tooska isaga hor yimaadeen Hillary Clinton oo iyadana ah Musharax u taagan Madaxtinimadda dalkaasi.
Waxa uu tilmaamay haddii uu ku guuleysto Aqalka Cad inuu Hillary Clinton dhigi doono Xabsiga sababo la xiriira iyadoo isticmaali jirtey E-mailo Khaas ah muddadii ay ahayd Xoghayaha Arrimaha Dibedda Maraykanka.
Waxa kale oo uu soo hadal-qaaday Ficil-xumidii uu isagu kula kacay Haweenka sannadkii 2005-tii, wuxuuna ku dooday in Ficiladiisa ka daran yihiin qaabkii uu Madaxweyne Bill Clinton kula kacay Haweenkii uu la gogol galay.
Waxa kale oo uu Hillary Clinton ku eedeeyey inay dagaal kala hortegtay Hawenkii sheegay inuu Bill Clinton la gogol glay muddadii u dhexeysay 1993-kii ilaa 2001-dii.
Dhinaca kale, Musharax Hillary Clinton oo 68 jir ah waxay sheegtay inuusan Donald Trump u qalmin inuu ka taliyo Aqalka Cad, isla markaana ay inta badan Siyaasiyiinta Xisbiga Jamhuuriga kala noqdeen Kalsoonida ay ku taageeri lahaayeen.
Doodda Labada Musharax oo socotay muddo 90 daqiiqo ah ayaa waxay qeyb ka tahay Ololaha loogu diyaar garoobayo Doorashadda Madaxtinimadda ee bisha soo socota ee November 8-da ka dhacayso Maraykanka.